MultiIconMover, mamindra fampiharana maromaro amin'ny fotoana iray (Cydia) | Vaovao IPhone
MultiIconMover, mamindra fampiharana maromaro amin'ny fotoana iray (Cydia)
Hatramin'ny namoahan'ny vondrona Evad3rs ny jailbreak, dia misy fanavaozana tsy tambo isaina havaozina hanohanana ny rafitra miasa vaovao an'i Apple: iOS 7. Ora vitsy lasa izay dia miresaka momba ny tweak tena mahaliana antsoina hoe AndroidLock XT izahay izay namela ny mpampiasa hanokatra ny fitaovany amin'ny alàlan'ny maodely Android-style. Izany dia manome fiarovana bebe kokoa amin'ny iPad raha toa ka maodely kokoa noho ny kaody 4-na fehezanteny manana tarehintsoratra maro isika. Androany isika dia hiresaka momba ny tweak antsoina hoe MultiIconMover izay ahafahantsika mamindra sary masina maromaro eo amin'ny solaitrabe amin'ny fotoana iray; izany hoe raha te-hifindra rindrambaiko x avy amin'ny efijery lohataona iray mankany amin'ny iray hafa aho dia tsy maintsy mifidy azy ireo fotsiny ary mifindra amin'ny pejy irina. Raha te hahafantatra misintona ianao MultiIconMover mila mamaky fotsiny ianao.
Mamindra sary masina marobe indray mandeha miaraka amin'ny MultiIconMover
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny miditra amin'ny Cydia ary manao fikarohana amin'ny teny «MultiIconMover«. Ny fiovana dia eo am-pamoloana an'i BigBoss Napetrakao amin'ny alàlan'ny default amin'ny Cydia izy io, ka tsy mila mampiditra tahiry vaovao ianao.
Tsy maintsy manamboatra lohataona kely amin'ny fitaovanao ianao. Rehefa miverina eo amin'ny solaitrabe ianao dia anjaranao ny manomboka mampiasa MultiIconMover. Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ity tweak ity dia tsy manana menio ao amin'ny fikirana iPad izy io. ihany koa izy io koa dia tsy manana fampiharana fanampiny apetraka izany rehefa manao ny resource.
Mba hanombohana mampiasa MultiIconMover, kitiho ary tazomy ny fampiharana eo amin'ny solaitrabe mandritra ny telo segondra (toy ny hoe mamafa ny rindranasa ianao) ary safidio ireo rindranasa tianao hivezivezy. Ny rindranasa rehetra apetakao dia homarihina amin'ny «tick» ary hiara-mandroso izy ireo.
Vantany vao nosafidintsika ireo rindranasa rehetra izay te-hifindra miaraka, ampy ny mametraka ny iray amin'ireo rindranasa voafantina eo amin'ny efijery izay tiantsika hametrahana ny ambiny ary tsindrio indray ny bokotra Home, ny rindranasa izay nanana "tick" dia ho eo amin'ny toerana iray ihany noho ny hetsika MultiIconMover.
Fanazavana fanampiny - Vohay ny fomba Android iPad anao amin'ny AndroidLock XT (Cydia)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » MultiIconMover, mamindra fampiharana maromaro amin'ny fotoana iray (Cydia)
Nohavaozina ny Spotify ho an'ny iOS mamela anao hihaino mozika maimaim-poana amin'ny iPhone
iSelfie, fampiharana izay fanaraha-maso lavitra ho an'ny fakantsarinao iOS